အလှူငွေ တွေ ကို မတရား လိမ်စား သူတွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လိပ်ပြာ လုံစေ ဖို့ ပြောလိုက်တဲ့ “အိန်ဂျယ်လမုန်” – GaMone Media
အလှူငွေ တွေ ကို မတရား လိမ်စား သူတွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လိပ်ပြာ လုံစေ ဖို့ ပြောလိုက်တဲ့ “အိန်ဂျယ်လမုန်”
ပရိသတ်ကြီးရေ.. မော်လ်ဒယ်သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချော အိန်ဂျယ်လမုန် ကတော့ အနုပညာ လောကမှာ ယောကျ်ားလေး ပရိသတ်တွေ အပြင် မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေကပါ ချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးပါပဲ..။ အောင်မြင်တဲ့အနုပညာရှင် အဖြစ် ရပ်တည်နေတဲ့သူမကတော့ လက်ရှိအခြေအနေတွေ မှာလည်း သူမအနေနဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေ တတ်နိုင် သလောက်ပြုလုပ်ကာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ တစ်သားတည်း ရပ်တည်နေတာ တွေ့ရပါတယ်..။ ကိုယ်တိုင်လမ်းပေါ်ထွက်ကာ လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ အင်တိုက် အားတိုက်ပါဝင်နေတဲ့အပြင် လှူဒါန်းမှုတွေ မှာလည်း လက်မနှေးဘဲ အလှူလေးတွေ ပြုလုပ်နေတဲ့ အိန်ဂျယ်လမုန် ကတော့ အလှူငွေတွေကို လိမ်စားနေကြသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောပြ လာပါတယ်..။
သူမကိုယ်တိုင်လည်း အလိမ်ခံရဖူးတဲ့ အကြောင်းလေးကို ပြန်လည်ပြောပြရင်း သူများ ချွေးနည်းစာအလှူငွေတွေကို မတရားလိမ်စားနေကြတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး လိပ်ပြာလုံစေဖို့ကို ထိထိမိမိလေး ပြောပြထားတာပါ..။ “အလှူငွေတွေမတရား လိမ်စားပြီး လိပ်ပြာလုံရဲ့လား တဆင့်ခံ လှူပေးတဲ့ သူတွေအရမ်းများလာပီး အလှူငွေတွေကို အမျိုးမျိုးလိမ်နေကြတာ ဘာလို့ပါလဲ?? ဒီငွေတွေကို ခုလိုလိမ်ပြီးသုံးနိုင်ကြသေးတာအံ့ဩမိပါတယ်… ကိုယ်လည်း အရင်က၂ခါလောက်ခံခဲ့ရဖူးတယ် ကိုယ့်ချွေးနဲစာလေ ဝမ်းနည်းလွန်းလို့ ငိုတောင်ငိုခဲ့ဖူးတယ်..ပီးတော့ ကိုယ့်ဘက်ကခွင့်လွှတ်ပီးထားလိူက်ပါဆိုပီး နေခဲ့ပေမယ့် ကံကြမ္မာက မနေပါဘူး
ပြောချင်တာက ခုလိုလူတိုင်းခက်ခဲပြီး မသေရုံတမယ် အားတင်း ရုန်းကန်နေတဲ့ အချိန် မှာ ပိုလို့တောင် မလုပ်သင့်ပါဘူး. ဘာသာတိုင်းက ခုလိုပဲသင်ပြ/ပြောပြထားပါတယ် လူတွေ ငိုယိုပြီးမှ ရတဲ့အပူစာကို စားနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဆက်ပြီး စားပါ မပြောလိုပါဘူး ဘုရားတရားဆိုတာ ဘန်းပြလုပ်ပီး လူချင်ခင်မှုကိုရနိုင်ပေမယ့် အတွင်းထဲက စိတ်နှလုံး ကို ဘုရားက သိမြင်ပါတယ် .. လိပ်ပြာ လုံကြပါစေ အလှူရှင်တွေအပေါ် ဒီထက်မက သာ၍တိုးပွါးသော အောင်မြင်မှုတွေ ရကြပါစေ လှူရင်းနဲ့တိုးပွါးသော ပစ္စည်းဥစ္စာဆထက်တပိုး ရှိပါစေ တဆင့်ခံ လှူပေးတဲ့ လူငယ် ပရဟိတ ကလေးတွေ Volunteers အပေါ် တောက်ပ တဲ့ အနာဂတ်တွေနဲ့ ရှေ့ဆက်မယ့်လမ်းမှာ ဘုရားသခင်သာ၍ ကောင်းချီးပေးပါစေ..” ဆိုပြီး အိန်ဂျယ်လမုန်က ရေးသားပြောပြထားတာပါ..။
ပရိသတ္ႀကီးေရ.. ေမာ္လ္ဒယ္သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသမီးေခ်ာ အိန္ဂ်ယ္လမုန္ ကေတာ့ အႏုပညာ ေလာကမွာ ေယာက်္ားေလး ပရိသတ္ေတြ အျပင္ မိန္းကေလး ပရိသတ္ေတြကပါ ခ်စ္ခင္အားေပးေနၾကတဲ့ အႏုပညာရွင္တစ္ဦးပါပဲ..။ ေအာင္ျမင္တဲ့အႏုပညာရွင္ အျဖစ္ ရပ္တည္ေနတဲ့သူမကေတာ့ လက္ရွိအေျခအေနေတြ မွာလည္း သူမအေနနဲ႔ လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြ တတ္ႏိုင္ သေလာက္ျပဳလုပ္ကာ ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ တစ္သားတည္း ရပ္တည္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္..။ ကိုယ္တိုင္လမ္းေပၚထြက္ကာ လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ အင္တိုက္ အားတိုက္ပါဝင္ေနတဲ့အျပင္ လႉဒါန္းမႈေတြ မွာလည္း လက္မေႏွးဘဲ အလႉေလးေတြ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ အိန္ဂ်ယ္လမုန္ ကေတာ့ အလႉေငြေတြကို လိမ္စားေနၾကသူေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာျပ လာပါတယ္..။
သူမကိုယ္တိုင္လည္း အလိမ္ခံရဖူးတဲ့ အေၾကာင္းေလးကို ျပန္လည္ေျပာျပရင္း သူမ်ား ေခြၽးနည္းစာအလႉေငြေတြကို မတရားလိမ္စားေနၾကတဲ့သူေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လိပ္ျပာလုံေစဖို႔ကို ထိထိမိမိေလး ေျပာျပထားတာပါ..။ “အလႉေငြေတြမတရား လိမ္စားၿပီး လိပ္ျပာလုံရဲ႕လား တဆင့္ခံ လႉေပးတဲ့ သူေတြအရမ္းမ်ားလာပီး အလႉေငြေတြကို အမ်ိဳးမ်ိဳးလိမ္ေနၾကတာ ဘာလို႔ပါလဲ?? ဒီေငြေတြကို ခုလိုလိမ္ၿပီးသုံးႏိုင္ၾကေသးတာအံ့ဩမိပါတယ္… ကိုယ္လည္း အရင္က၂ခါေလာက္ခံခဲ့ရဖူးတယ္ ကိုယ့္ေခြၽးနဲစာေလ ဝမ္းနည္းလြန္းလို႔ ငိုေတာင္ငိုခဲ့ဖူးတယ္..ပီးေတာ့ ကိုယ့္ဘက္ကခြင့္လႊတ္ပီးထားလိူက္ပါဆိုပီး ေနခဲ့ေပမယ့္ ကံၾကမၼာက မေနပါဘူး
ေျပာခ်င္တာက ခုလိုလူတိုင္းခက္ခဲၿပီး မေသ႐ုံတမယ္ အားတင္း ႐ုန္းကန္ေနတဲ့ အခ်ိန္ မွာ ပိုလို႔ေတာင္ မလုပ္သင့္ပါဘူး. ဘာသာတိုင္းက ခုလိုပဲသင္ျပ/ေျပာျပထားပါတယ္ လူေတြ ငိုယိုၿပီးမွ ရတဲ့အပူစာကို စားႏိုင္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဆက္ၿပီး စားပါ မေျပာလိုပါဘူး ဘုရားတရားဆိုတာ ဘန္းျပလုပ္ပီး လူခ်င္ခင္မႈကိုရႏိုင္ေပမယ့္ အတြင္းထဲက စိတ္ႏွလုံး ကို ဘုရားက သိျမင္ပါတယ္ .. လိပ္ျပာ လုံၾကပါေစ အလႉရွင္ေတြအေပၚ ဒီထက္မက သာ၍တိုးပြါးေသာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရၾကပါေစ လႉရင္းနဲ႔တိုးပြါးေသာ ပစၥည္းဥစၥာဆထက္တပိုး ရွိပါေစ တဆင့္ခံ လႉေပးတဲ့ လူငယ္ ပရဟိတ ကေလးေတြ Volunteers အေပၚ ေတာက္ပ တဲ့ အနာဂတ္ေတြနဲ႔ ေရွ႕ဆက္မယ့္လမ္းမွာ ဘုရားသခင္သာ၍ ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ..” ဆိုၿပီး အိန္ဂ်ယ္လမုန္က ေရးသားေျပာျပထားတာပါ..။
Previous post မိန်းကလေး တွေ ဒီ ရက်ပိုင်း အထူး သတိထား ကြပါ (အများ သိအောင် ရှယ်ထားပေးပါအုံး ….)
Next post ရက် (၉၀) ကျော် ကြံ့ကြံ့ ခံရင်း အောင်ပွဲ ဆင်ခဲ့ တဲ့ အတု ယူစရာ ကောင်း တဲ့ ယူကရိန်း လူ ထု တော် လှန်ရေး အကြောင်း